डा. केसीलाई राजधानी ल्याउन हेलिकप्टर लिएर मन्त्री जुम्ला जाँदै
ARCHIVE, POLITICS » डा. केसीलाई राजधानी ल्याउन हेलिकप्टर लिएर मन्त्री जुम्ला जाँदै
काठमाडौं - कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठान जुम्लामा अनसन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीलाई राजधानी ल्याउन हेलिकप्टर लिएर सरकारका मन्त्री नै जाने भएका छन् । अनशन बसिरहेका केसीको स्वास्थ्य अबस्था बिग्रिदै गएको र थप समस्या भए बर्षाका कारण समयमा काठमाडौं ल्याउन नसकिने जनाउँदै शिक्षामन्त्री जुम्ला जान लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लिएर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल जुम्ला जान लागेका छन् । सेनाको एमआई–१७ नम्बरको हेलिकोप्टर जुम्ला पठाउने तयारी सरकारले गरेपनि केसी फर्किने या नफर्किने निश्चित भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले उनको स्वास्थ्य स्थिति विग्रिन नदिन र सम्वाद गर्न हेलिकप्टर पठाउन लागेका हुन् ।
सरकारले हेलिकप्टर पठाउने तयारी गरेपनि केसी नफर्किने जनाएका छन् । आफ्ना माग पुरा नभएसम्म आफु नफर्किने जवाफ दिएका छन् । यसअघि सरकारले पठाएका चिकित्सकहरुबाट उनले सुविधा लिन अस्वीकार गरेका थिए ।